Tencent NFT ကုန်သွယ်ရေး ပလက် ဖော င်းသည် နှစ်ဖက်စလုံး မှ သီချင်း များကို ဝန်းရံ ထားပြီး မူပိုင်ခွင့် အငြင်းပွား မှုတွင်ပါ ၀ င်သည် - Pandaily
Jun 02, 2022, 12:39ညနေ 2022/06/02 14:09:17 Pandaily
Huanhe, တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး Tencent က ပိုင်ဆိုင် NFT ကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်း, ကျော်ကြား တရုတ် ပန်းချီဆရာ Ju P é on ရဲ့ အနုပညာ လက်ရာ များ အပေါ်အခြေခံပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ် Mema စုဆောင်း မှုတစ်ခု စီးရီး ဖြန့် ချိ ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီးရီး စုစုပေါင်း ရှစ် တိုကင်, 3,620 မိတ္တူ ကန့်သတ် အသီးအသီး, 128 ယွမ် ($19.11) ကုန်ကျ သည်။ သို့ သျ ော လ ညျး,ပီ ယြန္း ပန္းခ်ီ ျပခန္း သည္ ယခင္က ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်း မှုများကို ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ဖြန့်ဝေ ခြင်းသည် မူပိုင်ခွင့် အငြင်းပွား မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေ ကြောင်း ထောက်ပြသည်။
Chongqing ရှိ Pea Art Museum သည် Xu Beihong ၏ ယခင် နေထိုင်ရာ နေရာတွင် ဒေသန္တရ အစိုးရမှ တည်ဆောက် ခဲ့သော အထိမ်းအမှတ် အနုပညာ ပြတိုက် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း လူမှု မီဒီယာ ပလက်ဖောင်း မှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက် တစ်ခုတွင် ပြတိုက် က “အချို့သော ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်း များသည် Mr. Xu Beihong အမည်ဖြင့် ဆက်စပ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်း မှုများကို ရောင်းချ သည်။ ဤရွေ့ကား ဒစ်ဂျစ်တယ် collection များကို အတု အကျင့် ကို ကျင့် သို့မဟုတ် မူရင်း သက်သေအထောက်အထား များ မပေး နိုင်ခြင်း အပေါ်အခြေခံသည်။ တချို့က မစ္စတာ Xu နဲ့ ဘာမှ မဆိုင် ပါဘူး။ ဤ ရောနှောထားသော ငါး များနှင့် နဂါး စုဆောင်း မှုများသည် စားသုံး သူများ၏ အခွင့် အ ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား ကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီး စေပြီး Mr. Xu ၏ ဂုဏ် သိ က္ခ ာ၊ ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာ နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ရရှိသော ဉာဏ ပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် များ ကိုချိုးဖောက် ခဲ့သည်။ “
“မစ္စတာ Xu Beihong နှစ်ပေါင်း 50 ကျော် ကွယ် လွန်သွား ခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့် လေလံ ၏ ပိုင်ရှင် Huanhe နှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ခွင့်ပြု ချက် ခွင့်ပြု ချက် ရှိသည် ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိပါတယ်. တိကျတဲ့ သတင်းရင်းမြစ် အကြောင်းကြား လို့မရ ပါဘူး. ကျနော်တို့ တင်းကြပ် စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပစ္စည်းများ နှင့် အကျင့် ကို ကျင့် ၏ ခွင့်ပြု ချက် ကြီးကြပ်, ရောင်း ရန် အကျင့် ကို ကျင့် ခွင့်ပြု ချက် ပြီးနောက် ဖြန့် ချိ ခဲ့သည်.” ဟု အဆိုပါ ကြေညာချက်ကို ပြန်ကြားရေး, Huanhe ၏ ပြောရေးဆို ခွင့် ရှိသူ တုံ့ ပြန်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:COL Digital Publishing သည် “ပဉ္စမ Prism” စုဆောင်းမှု ပလက်ဖောင်း ကိုစတင် ခဲ့သည်
Huanhe အက် ပလီကေးရှင်း တွင် ဖောက်သည် များ၏ ၀ န်ဆောင် မှုမှာ “ကျွန်ုပ်တို့သည် Pea Art Museum ၏ လက်ရာ များကို ထုတ်ဝေ ခြင်း မရှိပါ” ဖြစ်ပြီး စုဆောင်း မှုများကို “ထုတ်ဝေသူ Beijing Huangcheng Art Trading Centre မှ လိုင်စင် ရ ထားသည်”
Beijing Huangcheng Art Trading Centre မှ ၀ န်ထမ်းများက ပြည်တွင်း မီဒီယာ များ ကိုအတည်ပြုBlockchain နေ့စဉ်စင်တာ သည် မြစ် တစ်ဝိုက် ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်း မှုများကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
ရှေ့နေ များက တရုတ် မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို ကိုးကား၍ မစ္စတာ Xu Beihong သည် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန် ပြီးနောက် သူ၏ အလုပ်ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး အခြား သူများက ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် လျော်ကြေး မပေးဘဲ အသုံးပြု နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် စာရေးသူ ၏အမည် ကိုဖော်ပြ သင့်ပြီး ခွင့်ပြုချက် မရ ပဲ အလုပ် ကိုပြုပြင် ခြင်းမပြု ရ။
မ ပြည့်စုံသော ကိန်းဂဏန်းများအရ SenseTime, Whale Detect, Huanhe နှင့်အခြား “Book Cat” အပါအ ၀ င် Xu Beihong နှင့်ဆက်စပ်သော NFT များကို ဒစ်ဂျစ်တယ် စုဆောင်းမှု ပလက်ဖောင်း များစွာ မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Tencent သည် TheOne.art NFT WeChat အက် ပလီကေးရှင်း ကို ပိတ်ပင် ထားသည်
"TheOne.art NFT" လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ WeChat Mini Program ကို ပိတ်ပင်Tencentဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ပေးသော ဒီဂျစ်တယ် စုဆောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု သည် ခွင့်ပြုချက် မရှိသော ၀ န်ဆောင်မှု အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
ဘူတာ B က “Ged” ဒစ်ဂျစ်တယ် အနုပညာ avatar ဖြန့်ချိ
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် "ဘူတာ Bလူကြိုက်များသော တရုတ် ဗီဒီယို streaming platform ပေါ်တွင် "ဒီဂျစ်တယ် စုဆောင်းမှု"ဘူတာ B"Ged" () လို့ခေါ်တဲ့ ဒီဂျစ်တယ် အနုပညာ avatars ၂, ၃ ၃၃ ခုကို မှတ်ပုံတင် ခြင်းအတွက် တရားဝင် ဖွင့်လှစ် ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Jan 06 ဇန်နဝါရီ 7, 2022